Maxaad Ka Taqaanaa Shanta Qodob Ee Gaboojiye Qofka Isaga Oongaadhin Xiligii Dada | Hawraar
Maxaad Ka Taqaanaa Shanta Qodob Ee Gaboojiye Qofka Isaga Oongaadhin Xiligii Dada
Waxaa jira caadooyin soo dedejiya in qofku gaboobo iyadoo Khuburadu ay sheegayaan inay jiraan sababo qofku isagoo aan ogeyn uu ku kaco kuwaasoo aanu la soconin raadka ay ku leedahay caafimaadkooda.
Haddaba waxaan idiin heynaa maanta astaamaha qofka ku soo dedejiya gabowga isagoo aan gaadhin wakhtigeedii, waxayna kala yihiin:
Sigaar Cabista: Khuburada caafimaadka ayaa isku raacsan in sigaar cabiddu ay halis ku tahay caafimaadka, iyadoo soo dedejisa calaamadaha gabowga, sidoo kale waxay abuurtaa cuduro halis ku ah nolosha qofka.
Jimicsi la’aanta: Waxaa la isku raacsan yahay in jimicsi la’aantu ay keento xanuuno kala duwan sida dhiigkarka, kelyo xanuun iyo wadne xanuun, sidoo kale waxay soo dejdejisaa gabowga.
Hurdo la’aanta: Culimada caafimaadka ayaa sheegaya in hurdo la’aanta ay halis ku tahay caafimaadka, iyadoo loo baahan yahay qofka weyni inuu seexdo 7 saacadood ugu yaraan, iyadoo hurdo la’aantu ay qofka ku keento inuu naaxo, waxaa kale oo ay keentaa gabowga.
Warwarka iyo walbahaarka: Warwarka ayaa waayihii ugu dambeeyay wuxuu kaalin weyn ka qaatay burburinta nolosha kumanaan qof sidaas darteed waxaa muhiim ah in qofka iska ilaaliyo Warwarka iyo walbahaarka, waxay saameyn toos ah ku yeeshaan jirka iyo niyadda qofka, iyadoo la sheegayo in qofku isagoo aan gaadhin da’diisii inuu sii Gaboobo.
5. Qurxinta jidhka : Aad ayay u wanaagsan tahay in qofku is qurxiyo waxaa se ka sii muhiimsan in qofku marwalba ka fikiro inuu jidhkiisa qooyo oo uu cabo biyo badan marwalba si jidhkiisu uu marwalba u qoyanaado, waxaana lagama maarmaan ah in qofku iska hubiyo nuuca kiriimada uu isticmaalayo iyo inay ku jiraan kiriimada soo dedejiya in qofku gaboobo. Waxaa lagama maarmaan ah in qofku cabo maalintoo 8-10 koob oo biyo ah.